Ungandibatsira here kuti ndigone kusarudza Amazon chaiyo keyword tracker kutungamira pamusoro pemusika?
Pasinei nemhizha kana chigadzirwa chamunenge muchichitengesa, munofanira kuchengeta mapeji emagetsi enyu zvakanaka-kwazvo kuitira kuti muve nemikana yakasimba yekuzadzisa zvakakwana nhamba inowedzera yekutengesa mikana. Kunyange zvazvo Amazon inofanirwa ecommerce ecommerce uye mutoro-kutengesa mutengesi, iwe unotova nezvakawanda zvokuita, zvakanyanya kutarisa, uye zvakawanda zvekuvandudza uko. Saka, kutarisira sei nguva dzose dzinopedza nguva uye dzimwe nguva zviito zvekushanda zvakaoma? He is here when Amazon's keyword tracker and competitive research tools come into play.
Zvechokwadi, hapana purogiramu yepurogiramu kana shanduro yeIndaneti yekuita zvinhu zvose kwauri nenzira inofambisa. Asi inotevera Amazon keyword tracker zana uye zvinobatsira software vabatsiri vanogona kuita kuti zvinhu zvive nyore. Zvichida izvo zvine chokuita nekudzika-keyword kutsvakurudza uye nekukwikwidza kunokosha kunzwisisika zvakanyanyodikanwa kuti urarame pane izvo zvakakonzerwa uye zvakakwikwidzana pamusika.Top 3 Amazon Keyword Tracker Tools
Seriously, ini ndinokurudzira kutora ichi chakare chinyorwa chekutsvakurudza chinhu chinoshandiswa nevepasi rose
kutsvaga giant seyakanaka yako kickstart solution yekuenderera mberi neshoko rakazara rekutsvakurudza mashoko rinotungamirirwa nenzira yakarurama kubvira pakutanga. Ndinoreva kuti pasinei neiyi toolkit isingatauri zvakakonzerwa nekutengesa kuAmazon, ichiri chichibatsira zvikuru pakuwana mufananidzo mukuru wekugona kukunda kushamwaridzana nekutsvaga kunoshandiswa nevashambadzi venyika yose, uyewo kuva nekunzwisisa kwemazwi emhando yekutsvaga uye yezvino yemazinga emakwikwi, kunyanya nokuda kwezvakanyatsotarisirwa kwenguva refu-tail keyword mitauro.
Cherechedza, zvisinei, kuti Google Keyword Planner inongova danho rokutanga pane nzira yako yekutungamirira pamusika. Zvinoreva kuti gare gare, iwe uchafanira kusarudza yako pachako inoshandiswa Amazon keyword tracker tool pasi chero mamiriro ezvinhu - kungoita kuti urege kunyengedza neshoko rakanyanyisa redu rekutsvaga kubva kune dzakawanda zvakasiyana siyana izvo zvisingatori kuva nechinangwa chekutenga zvakasimba.
Kunyange zvazvo inotevera mazita eAmazonword tracker tool haisi kuwanika pasina (inodhura chimwe chinhu chinenge madhora makumi maviri pamwedzi) , zvechokwadi. FreshKey keyword suggestion tool inogona kuva nzvimbo yakaisvonaka pakupedzisira inopfuurira nepamusoro pezvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa, zvakasiyana uye zvakasiyana-siyana zvakasiyana-siyana, LSI refu-muswe keywords, uyewo zvinyorwa zvisingatauriki zvakakwana - kuuya kunopfuura kwepfungwa yekutanga yeSearch Engine Optimization. Panzvimbo pokuzvidzivirira nechinhu chimwe chete chekushandisa, kana kuisa mari pane chero ipi zvayo yakasimudzirwa uye yakabhadharwa, ndinokurudzira kuedza FreshKey sechinhu chisingaverengeki chine simba chokukunda mazwi echinhu uye chinhu chinobatsira chaizvo pazvinouya pakubvisa chero ipi zvayo inogona kusatsvaga kutsvaga mashoko angave uyewo kuve kukanganisa maitiro ako ehupenyu kuAmazon.
The last Amazon keyword tracker tool for today is Soovle, a free and easy-use solution solution for keeping your product listings always up-to-date without spending too much time pakutsvakurudza kwakaitwa. Ongorora zvikumbiro zvekushandisa zvakanyanya zvakashandiswa nevatengi vanogara vachigadzira zvisikwa zvezuva nezuva kwete neAmazon chete, asi pane imwe iyo yakakurumbira ecommerce platforms, dzakadai seBay kana Alibaba store. Chii chinowedzera - mubatsiri uyu wepaIndaneti angaratidza mazano ake akasimba zvikuru kunyanya kana zvasvika pakufungisisa huwandu hwakawanda hwekuvimbiswa kwemashoko ezvinyorwa uye kuedza nekubatanidzwa kwakakurumbira-kutsvaga kushandiswa nevashandi vari kurarama pane dzakawanda zvinowanzo kutsvaga injini Source .